News | Messi
News | Tag: Messi
'त्यही भएर मेस्सी इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी'
एजेन्सी । पुर्व बार्सिलोना खेलाडी जाभी हर्नानडेजे स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भएको बताएका छन् । कुनै समय मेस्सीको टिममेट समेत रहेका उनले मेस्सीको तारिफ गरेका हुन् । उनले रोनाल्डिनो पनि उत्कृष्ट खेलाडीको सुचीभित्र पर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन् मेस्सीले ६
'यसपटकको बेलोन डिओर अवार्ड रोनाल्डोलाई दिनु हुँदैन'
एजेन्सी । पुर्व रियल मड्रिड खेलाडी इकर कासिलासले यसपटक युभेन्ट्सका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बेलोन डिओर जिते तर्क संगत नहुने बताएका छन् ।
'मेस्सी आँट छ भने रियल मड्रिडबाट खेलेर देखाउँ'
एजेन्सी । बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी हुन् लियोनल मेस्सी । उनलाई इतिहासकै उत्कृष्ट खेलाडीका रुपमा पनि चिनिन्छ । तर, केही फुटबल लिजेण्ड भने यो टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्छन् । उनले बार्सिलोनामा मात्र रहेर यो उपलब्धि हासिल गरेका कारण यति धेरै उनको बखान हुनु अलि तर्कसंगत नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
मेस्सी किन रोनाल्डो झै आफ्नाेबारेमा बोल्दैनन् ?
एजेन्सी । २०१९ गोल्डेन बूट जितेपछि बार्सिलोनाका सामु लियोनेल मेस्सीले स्वीकार गरे कि उनले आफ्नो करिअर सुरुवाती दिनभनदा अब धेरै आफ्नो शरीरको देखभाल गर्नुपर्दछ।
मेस्सीलाई नमिठो झट्का, तीन महिना प्रतिबन्ध
एजेन्सी । अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान लियोनल मेस्सीलाई तीन महिने प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
मेस्सी बिदा सकेर बार्सिलोना फर्के
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी बिदा सकाएर बार्सिलोना फर्किएका छन् ।
लियोनल मेस्सीलाई अर्को झट्का !
एजेन्सी । सन् २०१९ मा घोषणा हुने विश्व वर्ष फुटबल खेलाडी अर्थात् बेलोन डि‘ओरका लागि मुख्य दाबेदारहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
किन टेन्सनमा छन् मेस्सी ?
एजेन्सी । अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी हुन् लियोनल मेस्सी । उनले बार्सिलोना क्लबलाई उपाधिहरु जिताउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दै आइरहेका छन् । तर, अर्जेन्टिनाका लागि भने उनलाई भाग्यले साथ नदिएको समिक्षकहरु बताउँछन् ।
अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमा पुग्दा पनि खुसी छैनन् मेस्सी
एजेन्सी । भेनेजुएलामाथि सहज जित निकाल्दै उपाधि दाबेदार अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ । तर, स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीले जारी कोपा अमेरिका आफ्नो लागि उत्कृष्ट नरहेको बताएका छन् । उनले आफुले चाहेजस्तो खेल पस्किन नसकेको बताएका छन् ।
'मेस्सीले कसैलाई दबाब दिने काम गरेका छैनन्'
एजेन्सी । बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीले क्लब तथा राष्ट्रिय टोलीमा आफ्नो दबाब नदिने गरेको लुइज स्वारेजले बताएका छन् ।